Fifanakalozana : Herinandron’ny kolontsaina Koreana
09/08/2018 admintriatra 0
Samy misotro ranon’ampango. Firenena mpifandray ara-diplômasia amin’i Madagasikara i Korea. Nandritra ny fitsidihina ara-pomba fifanajana teo amin’ny masoivohon’i Korea eto Madagasikara, Lim Sang-woo sy ny minisitra Johasy Eléonore, misahana ny kolontsaina, ny fampiroboroboana ny asa …Tohiny
Mozika rap : Vahinin’i Steph Pockets i Bambs
Tsy mena-mitaha amin’ireo mpanakanto vahiny ny mpiangaly rap malagasy. Vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo mpanakanto vahiny, dia nivoaka ny faran’ny volana jolay teo ny hira vaovaon’ilay mpanao rap japoney Steph Pockets, ary nampitondrainy ny lohateny hoe …Tohiny
Seho takariva : Hanafika ny « Le Glacier » ny tarika Ny ainga
Niova fitana ve? Tarika iray fantatra amin’ireo seho an-kalamanjana. Sambany hiakatra ny Le Glacier etsy Analakely amin’ny seho takariva ny tarika Ny Ainga. Ny gadona « country » no tena ahafantarana io tarika noforonin’i Om-Guy …Tohiny
8 août 2009 : Nodakan-dRajoelina i Monja
Nataon’i Andry Rajoelina fitaovana sy sorona nakana fahefana fotsiny ny filoha nasionalin’ny antoko MONIMA, Monja Roindefo. Vao tafakatra teo amin’ny fitondrana ity « putschiste » ity dia izay hanilihana azy tsy ho praiminisitry ny Tetezamita …Tohiny